Graduate Engineer Training (Internship) for RE Registration with Myanmar Engineering Council for BE Graduates
အပိုင်း(၁) ဘွဲ ့ရ အင်ဂျင်နီယာများအင်ဂျင်နီယာလက်တွေ ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်
IQY Technical College ဆရာများကလက်တွေ ့ဘာသာများကိုသင်ပေးခြင်း
Part 1-Graduate Engineering Practical Training
The training will involve
· Practical Courses http://www.highlightcomputer.com/PracticalCourses.htm
that will be taught by IQY Teachers
Ks 30,000 for Engineering Practical Certificate courses (up to4courses)
အပိုင်း(၂) အင်ဂျင်နီယာလက်တွေ ့လုပ်ငန်းပညာရပ်ဒီပလိုမာတက်ခြင်း
http://www.highlightcomputer.com/profdipenggpractice2.htm မှအောက်ပါဘာသာတို ့သင်ပေးမည်။
ENG604-Occupational Health & Safety
Part2Professional Diploma in Engineering Practice
Ks2Lakh for Professional Diploma in Engineering Practice in which the subjects are taught by PE/RSE registered with MEC
အပိုင်း(၃) အင်ဂျင်နီယာလက်တွေ ့လုပ်ငန်းအတွေ ့အကြုံရယူခြင်း
Myanmar Civil Defence Engineers Group ဝင်ကာစေတနာ့ဝ န်ထမ်းအဖွဲ ့များ ၏မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင်လုပ်ကိုင်နေသောတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အတွေ့အကြုံရယူခြင်းသို ့မဟုတ်ပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အကြီးတန်းမှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီ
ယာတို ့ကလမ်းညှွန်ထောက်ကူှမှုဖြင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးမြန်မာ
ပြည်တွင်း အတွက် ပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အကြီးတန်းမှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာတို့၏ထောက်ခံချက်၊ Singapore/ ASEAN အတွက် Fellow of Singapore Institute of Engineering Technologist ၏ထောက်ခံချက် ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွက်သြစတြေလျ ပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာ ၏ထောက်ခံချက် ကိုအခမဲ့ပေးမည်။
Part3Engineering Experience
Join Myanmar Civil Defence Engineers Group in which the participants can have voluntary engineering experience with the organizations which are doing the various construction tasks all over Myanmar.
Do the job relevant to engineering and have mentoring with IQY Engineering supervised by PE/RSE
On completion, the Interns will receive
· Service Recommendation or Supervised Work Experience certified by
1. PE/RSE for RE Application in Myanmar
2. FSIET for Engineering Technologist work & Membership in Singapore & ASEAN
3. Australian PE for International Engineering jobs/ Membership
အပိုင္း(၁) ဘဲြ ့ရ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအင္ဂ်င္နီယာလက္ေတြ ့ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္
IQY Technical College ဆရာမ်ားကလက္ေတြ ့ဘာသာမ်ားကိုသင္ေပးျခင္း
အပိုင္း(၂) အင္ဂ်င္နီယာလက္ေတြ ့လုပ္ငန္းပညာရပ္ဒီပလိုမာတက္ျခင္း
http://www.highlightcomputer.com/profdipenggpractice2.htm မွေအာက္ပါဘာသာတို ့သင္ေပးမည္။
အပိုင္း(၃) အင္ဂ်င္နီယာလက္ေတြ ့လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳရယူျခင္း
Myanmar Civil Defence Engineers Group ဝင္ကာေစတနာ့ဝ န္ထမ္းအဖဲြ ့မ်ား ၏ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္တြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အေတြ့အၾကံဳရယူျခင္းသို ့မဟုတ္ပညာရွင္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္အၾကီးတန္းမွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီ
ယာတို ့ကလမ္းညွြန္ေထာက္ကူွမွဳျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းလုပ္ျပီးျမန္မာ
ျပည္တြင္း အတြက္ ပညာရွင္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္အၾကီးတန္းမွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာတို့၏ေထာက္ခံခ်က္၊ Singapore/ ASEAN အတြက္ Fellow of Singapore Institute of Engineering Technologist ၏ေထာက္ခံခ်က္ ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအတြက္ၾသစေၾတလ် ပညာရွင္အင္ဂ်င္နီယာ ၏ေထာက္ခံခ်က္ ကိုအခမဲ့ေပးမည္။